ဥပုသ်နေ့နဲ့ပတ်သတ်သမျှ သိကောင်းစရာများ အပိုင်း(၁) | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Copy/Paste » ဥပုသ်နေ့နဲ့ပတ်သတ်သမျှ သိကောင်းစရာများ အပိုင်း(၁)	9
Posted by ဆန်နီနေမင်း on Jul 16, 2012 in Copy/Paste |9comments
မေး။ ။ အရှင်ဘုရား တပည့်တော်တစ်ခုလောက်မေးချင်လို့ပါဘုရား။ တပည့်တော်တို့ဆရာက မေးခိုင်းလို့ပါ။ ဥပုသ်နေ့ကို ဘာဖြစ်လို့ (၈)ရက်နေ့နဲ့ (၁၅)ရက်နေ့လို့ သတ်မှတ်ခဲ့တာလဲဆိုတာ သိချင်လို့ မေးခိုင်းလို့ပါဘုရား။ အရှင်ဘုရားအားတဲ့အချိန် ဖြေကြားပေးစေလိုပါတယ်ဘုရား။
ဖြေ။ ။ ၀ါတွင်းကာလလည်း နီးလာတာနဲ့ ဥပုသ်အကြောင်း မေးလာတဲ့မေးခွန်းများကို အချိန်မီသိရှိရအောင် ဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။ ဥပုသ်ဆိုသည်မှာ ဥပေါသထ-ဟူသောပါဠိကို ဥပုသ်-ဟု မြန်မာပြန်ထားကြတာပါ။ ဥပ-ညစာမစားခြင်း၊ မေထုန်ရှောင်ခြင်းစတဲ့ ကောင်းသော အကျင့်များနဲ့ ပြည့်စုံစွာ ၀သထ-နေထိုင်ခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ကိုယ်ကျင့်သီလ မပျက်အောင် စောင့်ထိန်းကျင့်သုံးတာကို ဥပုသ်စောင့်တယ်လို့ ခေါ်တာပါ။ ဥပုသ်စောင့်ဖို့အတွက် နေ့ရက် များကို ဘုရားပွင့်တော်မမူမီကပင် သူတော်ကောင်းတို့ သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဥပုသ်သီလဆောက်တည် ရန်အတွက် ရှေးအစဉ်အလာကပင် ရက်သတ်မှတ်ထားတာ ကို အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့ ဒီလိုရက်ရှည်ကာလများစွာ ဥပုသ်သီလဆောက်တည်ကြတာလဲဆိုတော့ လူများရဲ့ စိတ်အစဉ်မှာ ကိလေသာမြူတွေ နေ့စဉ်တင်နေတဲ့အတွက် ထိုကိလေသာမြူတွေကို ဥပုသ်သီလ စောင့်ထိန်းပြီး ဆေးကြောသုတ်သင်ကြဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
မြတ်ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ကလည်း ဥပုသ်စောင့်ခြင်းကို ဦးခေါင်းလျှော်ခြင်းနဲ့ ဥပမာပြပြီး ၀ိသာခါကျောင်းအမကြီး ကို ဒီလိုဟောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ လဆန်း (၁)ရက်နေ့ဆို နေရောင်ရှိလို့ ဆံပင်ခြောက်သွေ့မည်ကိုမြင်တဲ့ အမျိုးသမီးဟာ ရေချိုးခေါင်းလျှော်ကြတယ်။ အဲဒီလို ခေါင်းလျှောက်လိုက်တော့ ဦးခေါင်းမှာ အညစ်အကြေးသန့်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါ ဆံပင်လည်း သွေ့ခြောက်သွားလို့ ဦးခေါင်းဟာ သန့်ရှင်းပြီးပေါ့ပါးသွား တယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ရက်များမှာ ဦးခေါင်းပေါ်ဝယ် မြူမှုန်ကျခြင်း၊ အတွင်းက အညစ်အကြေးများ ဦးခေါင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါ (၇)ရက်လောက်ကြာတော့ ဦးခေါင်းဟာ လေးလံလာပြန်တယ်။ အဲဒါနဲ့ တစ်ပါတ်လောက်ကြာတဲ့အခါ နောက်တစ်ကြိမ် ခေါင်းလျှော်ရတယ်။
အဲဒီလိုပဲ လူတို့ရဲ့စိတ်မှာ နေ့စဉ် စီးပွားရှာတဲ့အခါဖြစ်စေ၊ ပျော်ပါးတဲ့အခါဖြစ်စေ၊ ပုံစံမျိုးစုံနဲ့နေထိုင်သွားလာလှုပ်ရှားနေရင်း ရာဂ၊ ဒေါသစတဲ့ ကိလေသာမြူမှုန်တွေဟာ ကပ်ငြိနေတယ်။ သံသရာတစ်လျှောက်လုံးကလည်း ဘ၀မျိုးစုံနဲ့ ကပ်ငြိလာခဲ့ကြတယ်။ အဲဒါကြောင့် မိမိတို့သန္တာန်မှာ ကိလေသာတွေဟာ မရေတွက်နိုင်အောင် များနေတယ်။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး တရားထူးရတာချင်း မတူတာ၊ တရားအသိမတူတာ၊ အကျိုးပေးမတူတာတွေဟာ မိမိတို့ရဲ့ ကျင်လည်ခဲ့ရတဲ့ဘ၀တွေမှာ ကိလေသာတွေ ဘယ်လောက်ညစ်ကြေးလာအောင် ပြုလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာ မသိရတဲ့အတွက် မတူကြတာပါ။
တချို့က သူများလို ခဏလေးနဲ့တရားမှတ်ရင် တရားသိမယ်ထင်တယ်။ သူများလို ကောင်းတာလေး တစ်ခုလောက်လုပ်ရင် အကျိုးပေးမယ်ထင်နေတာလေ။ မိမိမှာ ဘ၀များစွာက ကောင်းမှု၊ မကောင်းမှုကို မသိလို့ဖြစ်စေ၊ သိလျက်နဲ့မိုက်ခဲ့လို့ဖြစ်စေ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ကိလေသာအညစ်ကြေးတွေက ဘယ်လောက်များသလဲဆိုတာ မသိရဘူးလေ။ ဒါကြောင့် မိမိတို့က မိမိတို့သန္တာန်မှာရှိတဲ့ ကိလေသာ အညစ်ကြေးတွေကို များများပယ်သတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားမှ ကိလေသာကင်းရာကိုရောက်မှာဖြစ်သလို မရောက်ခင်မှာလည်း ကိလေသာနည်းတဲ့ အကျိုးပေးကောင်းမှုတွေကို ခံစားရမှာပါ။
အဲဒီလို မိမိတို့ရဲ့စိတ်အစဉ်မှာ ကပ်ငြိမ်နေတဲ့ ကိလေသာမြူမှုန်တွေ သန့်ရှင်းအောင် အိမ်ရာအလုပ်တွေကို အနားပေးပြီး မကောင်းမှုများကိုလည်း ရှောင်ကြဉ်ကာ ဥပုသ်သီလဆောက်တည်ခြင်းနဲ့ ဆေးကြောပေးရပါ တယ်။ တစ်ပါတ်တစ်ခါလောက် မိမိသန္တာန်မှာရှိတဲ့ ကိလေသာညစ်ကြေးတွေ မသန့်ရှင်းနိုင်၊ မလျှော့ပါးနိုင်သေးလို့ အကြိုရက်၊ အပိုရက်များမှာပါ ဥပုသ်သီလ စောင့်ထိန်းပေးရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဘက်ခေတ်မှာဆိုရင်တော့ ရုံးပိတ်ရက်များဖြစ်တဲ့ စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့များကို ဥပုသ်နေ့များလို့ သတ်မှတ်ပေးပြီး စောင့်ထိန်းကြရင် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ပါတ်ရဲ့ အစဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ တစ်ခါသန့်ရှင်းထားလိုက်ပြီး တစ်ပါတ်ရဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့ စနေနေ့မှာ ထပ်သန့်ရှင်းလိုက်မယ် ဆိုရင် ကိလေသာတွေဟာ ကပ်လိုက်၊ လျှော့လိုက်နဲ့ဆိုတော့ ခံသာသေးတာပေါ့လေ။ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲ တစ်ပါတ်တစ်ခါလောက်ဆို ကိလေသာကပ်တာကပိုများပြီး လျှော်တာကနည်းနေရင် ကိလေသာက ဘယ်တော့မှ ကင်းမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ ပြောသာ ပြောရတာပါ။ ခုခေတ်က တစ်ပါတ်တစ်ခါမပြောနဲ့ ၀ါတွင်းလေး(၃)လကိုတောင်မှ တစ်ပါတ်တစ်ခါ ကိလေသာမလျှော်တဲ့လူတွေက များနေတာပါလေ။
အဲဒီတော့ ရှစ်ရက်၊ လပြည့်၊ လကွယ်နေ့များကို ဥပုသ်နေ့ဟု သတ်မှတ်ကြတာဟာ လူသားတွေရဲ့ အချိန်အခါအခြေအနေကိုကြည့်ပြီး သတ်မှတ်ကြတာပါ။ ဥပုသ်သီလကို မြတ်ဗုဒ္ဓအလိုကျဆိုရင် အနည်းဆုံးတော့ တစ်ပါတ်တစ်ခါတော့ စောင့်ထိန်းပေးရမှာဖြစ်ပြီး မိမိစောင့်ထိန်းနိုင်ရင် မိမိစောင့်ထိန်းတဲ့နေ့ဟာ ဥပုသ်နေ့ဖြစ်တာမို့ စောင့်ထိန်းနိုင်လေ ကောင်းလေးဆိုတာပဲ မှတ်သားထားကြပြီး နေ့ရက်များစွာ စောင့်ထိန်းနိုင်အောင် ကြိုးစားကြပါလို့ တိုက်တွန်းရင်း ဥပုသ်နေ့အကြောင်း သိကောင်းစရာကို ဒီမျှနဲ့ မိမိသိရှိသမျှ ဖြေဆိုပေးမှုကို ရပ်နားလိုက်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ဦးဇင်းရေးသားသမျှထက် ပိုမိုသိချင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့ မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်၊ အရှင်ဇနကာဘိဝံသရေးသားတဲ့ ရတနာ့ဂုဏ်ရည်စာအုပ်မှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ရင် ဥပုသ်အမျိုးအစားများပါ သိရှိရပါလိမ့်မယ်။
စာဖတ်ပရိသတ်များအားလုံး အသိဉာဏ်ဗဟုသုတများတိုးပွားပြီး တိုးပွားသမျှ ကျင့်သုံးလိုက်နာကာ ကိလေသာကင်းစင်တဲ့ နေရာမှာငြိမ်းချမ်းစွာ နေထိုင်နိုင်အောင် အားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလျက်……။
View all posts by ဆန်နီနေမင်း →	Blog
uzin says: ငါးပါးသီလသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ မူရင်းသီလ ဟုတ်ပါသလား။ ဗုဒ္ဓမပွင့်မီကပင် ရှိသော သီလ လို့ဖတ်ဖူးလို့ပါ။ သိရှိလိုပါတယ် အရှင်ဘုရား။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 51
ဆန်နီနေမင်း says: ငါးပါးသီလကို ဘုရားရှင်မပွင့်ခင်ကတည်းက စောင့်ထိန်းကြပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ငါးပါးသီလဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ပြည့်စုံရမဲ့ကျင့်ဝတ်ထဲမှာ ပါနေလို့ပါ။ သရဏဂုံသုံးပါး၊ သူတော်ကောင်းတွေစောင့်ထိန်းတဲ့ သီလတွေသာ ဘုရားရှင်ပွင့်ပြီးဟောပြောပေးမှ စောင့်ထိန်းကြတာပါ။
မောင်ပေ says: တပည့်တော်အနေနဲ့ 
ငါးပါးသီလ ဟာ ဆောက်တည်ဖို့ အရမ်းလွယ်သလို
စောင့်ထိန်းဖို့ လဲ အရမ်းခက်ခဲနေသလိုပါဘဲ ဘုရား
၅ ပါးမှာ ၄ပါး စောင့်ထိန်းနိုင်ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် သီလယူတိုင်း… “သုရာမေရယမဇ္ဇပမာဒဋ္ဌာနာ ဝေရမဏိသိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ” ဆိုတာကို ဘယ်တော့မှ မရွတ်ခဲ့မိပါဘူး ။
အသက်လဲ ငယ်သေးလို့ လဲ ပါမယ်ထင်ပါရဲ့ ။
သီလငါးပါးလုံးကို ဆောက်တည်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားရပါဦးမယ် ဘုရား
အရှင်ဘုရားရဲ့ပို့ စ်များကို အမြဲစောင့်မျှော် နေပါတယ် ဘုရား
aye.kk says: သီလ(၆)မျိုး
ဇောက် ထိုး says: ကိလေသာကင်းစင်တဲ့ နေရာမှာငြိမ်းချမ်းစွာ နေထိုင်နိုင်အောင် အားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလျက်……
ဆရာတော်ဘုရား… ကိလေသာကင်းစင်တဲ့နေရာတစ်ခုလို့ သီးသန့်မရှိဘူးလို့ယူဆမိပါတယ်ဘုရား။ ကိုယ့်သန္တာန်မှာ ကိလေသာကင်းအောင်အားထုတ်လို့ ကိုယ့်မှာ ကိလေသာကင်းသွားတာမျိုးပဲရှိတယ်လို့ယူဆမိပါတယ်ဘုရား။ ဒီအကြောင်းလေးကို အထူးလေးဂရုပြုမိတာကလဲ… ကျောက်သင်္ဘောဝါဒမှာ ခန္ဓာနဲ့နိဗ္ဗာန်တဆက် တည်း ဆိုတဲ့ ပြောဆိုမှုကို နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယက ၀ိနိစ္ဆယက ..
အညေ ခန္ဓာ..အညာ နိဗ္ဗာနန္တိ..အာမန္တာ… ခန္ဓာနဲ့နိဗ္ဗာန် တခြားစီ ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ် ဘုရား။
တကယ်တော့ အဲဒီပါဠိဟာ ပိဋကမှာ မပါဘူးလို့ သိရပါတယ်ဘုရား။ ဒီနေ့ သံဃမဟာနာယကကို ပိဋကမှာ မပါတဲ့ပါဠိ…မရှိတဲ့ပါဠိအတုနဲ့ ဆုံးဖြတ်ထားတာဆိုပြီး မကြာမကြာ ပြောတာဆိုတာ တင်ပြနေကြတာတွေ တွေ့ရှိနေလို့ တပည့်တော် အသိမှာ စွဲနေမိခြင်းလဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရား…
ထိုကြောင့် လူမှာကိလေသာကင်းသွားလို့ ကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခမရှိခြင်းကိုပဲ ငြိမ်းချမ်းမှုလို့ဆိုရမည်ထင်ပါတယ်ဘုရား
ကိလေသာကင်းနေတဲ့ နေရာတစ်ခု… အဲဒီနေရာရောက်သွားရင် ကိလေသာကင်းသွားစေတဲ့ နေရာတစ်ခုလို့ ရှိမည်မထင်ဟု တပည့်တော်ရဲ့ အယူအဆနဲ့ အမြင်ကို လျှောက်တင်မိပါတယ်ဘုရား….
နွေဦး says: ဦးဇောက်ရေ..
ဆရာတော်က “ကိလေသာကင်းစင်တဲ့ နေရာမှာငြိမ်းချမ်းစွာ နေထိုင်နိုင်အောင် ”
ဆိုတာ ကိလေသာဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း ကင်းစင် (နည်း)သောအရပ်ကို ဆိုလိုတာနဲ့တူပါရဲ့ဗျာ..။
ပြောချင်တာ ဥပုသ် စောင့်ပြီး ရုပ်ရှင်ရုံထဲတို့ နိုက်ကလပ်ထဲတို့ သွားမထိုင်နဲ့ ပေါ့ဗျာ..ဟဲဟဲ..။
မမ အညာသူ says: ဘုန်းဘုန်းဘုရား
MaMa says: ၀ါတွင်းရောက်ခါနီး ဥပုသ်အကြောင်းလေး သိလိုက်ရလို့ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် ဦးဇင်း ဘုရား။ [:)]
Comments By Postအဟံ ပထမံ - kai - padonmarCongress - ရာမည - ရာမညလူစွန့်စားမြင့်ကျော်နှင့် ခေါင်းပြတ်နတ်ရုပ်တု (စ/ဆုံး) - ရာမညကျွန်တော့်စိတ်ဓာတ် - Silver Twig - လုံမလေးမွန်မွန်မြေမျိုပျောက်ကွယ်ခြင်း - kai - uncle gyi``ဒေဝေါကြီး လာမှာစိုးတယ်´´ - kai - Mr. MarGaရပ်ကွက်မှသည် နိုင်ငံဆီသို. - kai - garudaအိပ်ပျော်နေသူများ နှိုးရခက်သည် 。。。。。。。。。 - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေး - မဟာရာဇာ အံစာတုံးမောင်ပေ ရဲ့ ပုံတိုပတ်စများ - Mobile13 - TNAသူတို့ ရောက်လာကြတော့မည်၊ သတိသာ ထား - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - မဟာရာဇာ အံစာတုံးbin bo..........(ဘင်ဘို) - uncle gyi - မိုး မင်းသားသို့ ချစ်သောဖေဖေ - uncle gyi - အရီးခင်လတ်အမျိုး ဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ကြမယ် ဆိုရင် ဖြင့် - uncle gyi - မောင် ပေကျီးအာသီးနှင့်တူသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ - TNA - TNAအထူးတလည် ကျေးဇူး တင်ရှိခြင်း - လုံမလေးမွန်မွန် - Mr. MarGaPassport လျှောက်မယ်ဆိုရင် - uncle gyi - အရီးခင်လတ်နားစွန် နားဖျား ရပ်ကွက်...။ - လုံမလေးမွန်မွန် - အလင်း ဆက်ကျွန်ုပ်ရောက်ရှိခဲ့သော ကျတ်တို့ဌာနီ - လုံမလေးမွန်မွန် - Mobile13သူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - အလင်း ဆက် - အလင်း ဆက်ရခိုင်မင်္ဂလာဆောင် .... (1) - GaviaGirl - Ma Eiအမုန်းတွေဝေး အပြုံးတွေပေးမယ့် ဒီည................................ - padauk moe - မောင် ပေတောင်းပန်အပ်ပါသည်။ - KZ - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေးကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေက ရတဲ့ အတွေး - Mr. MarGa - Mr. MarGaမိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေး - Mr. MarGaရထား ထွက်တော့ မယ် - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေး - မဟာရာဇာ အံစာတုံးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသို့ - အရီးခင်လတ် - မွေ့ကေသာအိပ်မက်မင်းသမီး - Phoe Thitsar - KZဘုံဆိုင်အတွင်းမှ မှတ်သားဖွယ်ရာ - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေး - ကြောင်ဝတုတ်East West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities